Ka faaiidaysiga Biyaha Roobka Badda ku quluqulaiyo Xakamaynta Gaajada waxaa qoray Cabdirashiid Axmed Guuleedd | Baadiye Media Center
Hargeysa (BMC)-Somaliland, marka la eego xaalada ay hadda ku jirto, waxa lagu tiriyaa wadamada ugu dib-dhacsan marka lagu cabiro halbeega caalamiga ah ee afka qalaad lagu yidhaahdo GNP per Capita, afkeenana loo turjumi karo dakhliga wadanka marka la xisaabiyo ee loo qaybiyo cadadka dadka wadanka ku nool ee muwaadiniinta ah. Cabirkaasi marka lagu eego waxaa qofkii sanadkii kusoo hagaagaya ilaa $ 500 (shan boqol Doolar calaa qof sanadkii). Cabirkaasi marka lagu eego dabcan waxaynu gelaynaa dadka ugu faqiirsan dunida. Daqaale xumiduna waa ta ugu wayn ee sababaysa in dadku ay jeclaystaan inay wadanka ka tacabiraan ama ka hijroodaan una hijroodaan wadamo ay ku tuhmayaan dhaqaale keena nolol ka duwan tay wadankooda ku haystaan.
Taasna jawaabteedu way fududahay oo waxa weeyaan in dhaamam waawayn laga sameeyo wadanka. Wadankeenu wuxuu hodan ku yahay buuro gaagaaban iyo qaar meel dhexaad ah oo markaa ay kasoo dhacaan biyaha roobku, kuwaasoo buuxin kara dhaamam waawayn iyo qaar meel dhexaad ahba. Cabbirka dhaamamka aan sheegayaana waa kuwo u dhaxayn kara 45,000M3 ilaa malaayiin M3. Dhaamamkaasi oo inta sifiican loo sahamiyo loo helo malgelintii loo baahnaa ayaa dhulka lagu beeran karaa kabacdina gaajada lagaga bixi karaa. Gaajaduna maaha ta maanta inta badan reer miyigeenu ay dareemayaan yariyo wayn ee waxa kamida ta nacasnimada ah ee taala magaalooyinka oo laga cunayo bariis Hindiya laga keenay iyo Paasto Talyaaniga laga keenay. “Food Security” oo afka qalaada ama “gaajo kabax” oo Afkeena ah waxa lahelaa marka uu wadanku iskaga filaado cuntada aasaasiga ah ama quutal daruuriga waxa loo yaqaano.
Waxaan leeyahay, waa suurtogal in mustaqbalka dhaw “dib u xoolayn” ama “restocking” in loo sameeyo bulshadeena ay xooluu ka baxeen, laakiin mustaqbalka fog waxa loo baahan yahay in la qorsheeyo sidii dadka loo bari lahaa sidii ay dhulka ugala soo bixi lahaayeen cunto ay ku noolaadaan iyo biyo ay cabaan. Labadaasi arimood waxay ku xidhan yihiin helitaanka carro wanaagsan oo wax lagu beerto iyo helitaanka biyihii saraca lagu waraabin lahaa. Ta hore oo ciida ah waan haynaa mid inaga badan. Ta loo baahan yahay in laga hawlgalaa waa sidii loo qaban lahaa biyaha cirkee dooxyada yaacaya iyo kuwa kasoo degaya ilaha faraha badan ee buuraha ku yaal. Samaynta dhaamam waawayn oo biyaha lagu kaydiyaana waxay u baanah tahay helitaanka laba arimood oo kala ah farsamadii hawshaasi lagu qaban lahaa iyo lacagtii hawshaasi lagu fulin lahaa. Farsamadii waa lahayaa. Waxa dhiman lacagtii.
Taasina dhib wayn maaha. Waxa loo baahan yahay inay wada shaqeeyaan dawlada iyo aqoon yahanada ku xeel dheer samaynta iyo qorista mashaariicda oo loo samaynayo si waafaqsan nidaamyada ay ku shaqeeyaan bankiyada caalamku. Qaar badan oo baananka caalamigaa ah iyo hayado duwali ah oo badan ayaa maalgelintaasi ku bixiya si deeq ahaaneed oo dawladana aan lagu xidhayn shardiga ah ictiraafka ayna ka baxsanayso dayn dulsaar wadata oo culays dhaqaale wadanka ku keeni karta. Fulinta mashaariicdaasna waxa loo raacayaa nidaamka loo yaqaano 3P ama “public private partnership” nidaamkaasoo ah mid ay ku shuraakoobayaan hayadaha dawlada qaarkood iyo shirkadaha ganacsi ee wadanka laga leeyahay.
Waxaan kusooo gabagabaynayaa odhaahdii ahayd “hawshii rag u kaco e Rabbi aqbalo way rumawdaa!!!!”. Waynu qaban karnaa!! Waana suurogal in wadanka aynu gaadhsiino marxalad horumar dhaqaale.